नयाँ शक्तिले नराम्रोसँग हारेपछि नेता पौडेलद्वारा पार्टी परित्याग !
ARCHIVE, POLITICS » नयाँ शक्तिले नराम्रोसँग हारेपछि नेता पौडेलद्वारा पार्टी परित्याग !
बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचना नयाँ शक्ति पार्टीले नराम्रोसँग हारेपछि पार्टी परित्याग सुरु भएको छ । नयाँ शक्‍तिको प्रवासी स‌ंगठनका नेता-कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । मलेसियामा नयाँ शक्तिको संगठन विस्तार गरेका नेता सुरज पौडेलको नेतृत्वमा नेता-कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।
पूर्व जनमुक्ति सेना समेत रहेका नेता पौडेलले बाबुरामको अार्थिक क्रान्तिको कुरालाई जनताले बहिस्कार गरिसकेका कारण अाफूहरुले पार्टी छोडेको बताए । विगत दुई वर्ष पहिले संयोजक बाबुराम मलेसिया गएको बेला पौडेल नयाँ शक्तिमा लागेका थिए ।
नेता पौडेलसहितका नयाँ शक्तिका नेता-कार्यकर्ताहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चामा अावद्ध भएका छन् ।